न्युजील्यान्डमा घर नपाएपछि मानिसहरू रुखमा बस्न थाले
शुक्रबार, मंसिर १३, २०७६ साल,
एजेन्सी । न्युजील्यान्डको नर्थल्यान्डमा मानिसलाई बस्नका लागि घर नभएपछि केही परिवारहरू जंगलमा, छाप्रोमा अनि रुखको हाँगोमा बस्न थालेका छन् ।
नर्थल्यान्ड देशको सबभन्दा गरीब क्षेत्र हो र त्यहाँको औसत आय २३ हजार ४०० न्युजील्यान्ड डलर छ । त्यहाँ ३२ प्रतिशत माओरी जनसंख्या छ जुन देशको अन्य भागको भन्दा दोब्बर हो ।
बिहीवार ह्वांगारेईमा राखिएको एक घरआवास बैठकमा माओरी मामिला मन्त्री नानाइया माहुताले उत्तरी टापु क्षेत्रमा सस्तो घर पाउन अत्यन्तै मुश्किल परेको कुरा सुने । त्यसले गर्दा मानिसहरू रुख, आफैंले बनाएका छाप्रा, पुराना गाडी, थोत्रा भत्केका घर लगायतमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
विशेषगरी माओरीका लागि घर पाउन समस्या रहेको माहुताले स्वीकार गरे । सरकारले उपलब्ध गराउने घरको प्रतीक्षासूचीमा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए ।
सरकारले नर्थल्यान्डमा घर बनाउनुलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएपनि स्थानीयहरू आफूलाई बेवास्ता गरिएको ठान्छन् ।
नर्थल्यान्ड अहिले न्युजील्यान्डको सबभन्दा बढी वृद्धि भइरहेको प्रान्त हो । अकल्यान्डका मानिसहरूले सस्तो घर पाउन छोडेपछि नर्थल्यान्डमा जमीन किन्ने अनि अकल्यान्ड शहरसम्म गाडीमा ओहोरदोहोर गर्ने विकल्प छान्न थालेका छन् । यसले गर्दा नर्थल्यान्डको जनसंख्यामा २।३ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।
यसले गर्दा नर्थल्यान्डका स्थानीयहरूका लागि घर किन्न वा भाडामा लिन झन् झन् गाह्रो भएको छ ।
कावाकावा र काइकोहे शहरमा कुनै समयमा गरीबी र आपराधिक समूहका कारण कोही जाँदैनथिए तर अहिले त्यहाँ घरजग्गा कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । त्यसले गर्दा त्यहाँ शताब्दियौंदेखि रहेका माओरीहरूले घरै किन्न नसक्ने स्थिति आएको छ ।
लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन
माइनस १५ मा झर्‍यो मुस्ताङको तापक्रम, धारा र खोलाको पानी जम्यो
अमेरिका-चीनबीच १७ महिनादेखि जारी व्यापार युद्ध रोकिने संकेत, भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय स्थगित
भारतीय पासपोर्ट मै छाप्यो भाजपाले चुनाव चिन्ह !
आज पहाडी तथा हिमाली भू–भागहरुमा भारी हिमपात र वर्षा हुने
भोली सार्वजनिक विदा हो कि होइन ? यस्तो भन्छ गृह मन्त्रालय
लोकसेवाले एकैपटक १ हजार ९० जना शाखा अधिकृतमा विज्ञापन खोल्यो